Dacwadihii sixirka ee ugu dambeeyey Canada: Dumar lagu eedeeyey sixroolenimo - BBC News Somali
Dacwadihii sixirka ee ugu dambeeyey Canada: Dumar lagu eedeeyey sixroolenimo
Muuqaal ku jira filimka the Wizard of Oz
Canada ayaa waxaa dhawaan la nasakhi doonaa sharci ka dhan ah iska yeelyeelka in qof uu wax sixri karo. Laakinse taasi kama hor istaagayso boolisku inay dacwado ku soo oogi karaan qolyaha isticmaala sawirrada khuraafaadka ah si ay kumanaan Doollar beenbeen uga dhacaan dadka.
Laba hablood oo reer Canada ah ayaa lagu eedeeyey inay iska dhigeen dad wax sixra, iyagoo jabiyey sharci-ciqaabeed aan aad looga aqoon Canada laakinse iminka aad loo baran doono.
Dacwadda ugu horraysa waxxaa lagu oogay 18 Oktoobar Dorie "Madeena" Stevenson, oo ah qof dadka u sheega nasiibkooda, degganna Milton, Ontario, ka dib 18 sano oo baaritaan lagu hayey.
Waxaa lagu eedeeyey inay macaamiisheeda si khiyaano ah uga qaadatay C$60,000 oo u dhiganta $45,000, taasoo ay uga qaadatay lacag ahaan iyo hanti ahaan.
Qabiil Latin Amerika ku nool oo ay aafo ku dhacday
"Ciddaan qancin wayno in ay na xagxagato xor bay u tahay"
Xigashada Sawirka, Lisa East
Todobaad ka dib, Samantha Stevenson oo reer Toronto ah, sheegatana inay leedahay awoodo qarsoon ayaa loo xiray eedo noocaas oo kale ah, laakinse aan xiriir la lahayn.
Booliska ayaa ku eedeeyey inay nin ka dhaadhicisay in waddada kaliya ee "balaayadu ay uga hari karto gurigiisa" ay tahay isagoo iibiya, lacagtana ku shuba xisaabteeda bankiga.
Dadka la eedeeyey ayaa inta badan sheegta awoodo aysan lahayn, ama inay wax bogsiin karaan, waxayna dalbadaan lacago aad u badan si ay dadka uga dul qaadaan sixirka ama balaayada ku habsata, sida ay boolisku sheegeen.
"Dhibbanayaasha ayaa inta badan laga dhaadhiciyaa inay rumaystaanin wax xun uu ku dhici doono haddii aysan lacag xawilin. Xataa mararka qaarkood waxaan aragnaa in dadka la weydiisto in ay alaab soo gadaan oo ka dibna ay soo diraan si looga nadiifiyo jinka ku jira" ayuu yiri dambi baare booliska ka tirsan, Dave Costantini.
Sharci weli qabyo ah ayaa iminka gacanta lagu hayaa kaasoo haddii uu soo baxo nasakhaya sharciga ka dhanka ah iska yeelyeelka sixroolenimada. Todobaadkii hore ayaa akhriskiisii seddexaad la mariyey aqalka senetka, waxaana la filayaa in uu sharci dhaqan gala noqdo marka uu ku dhaco saxiixa boqortooyada.